Waajibaadka qarinta sirta ee shaqaalahacaafimaadka iyo arrimaha bulshadda | Suomen Mielenterveysseura
Dhibaatada caafimaadka dhimirka si furan ayaa loogala hadli karaa qofka hawsha gacanta ku haya. Shaqaalaha caafimaadka iyo arrimaha bulshadda waxaa saaran waajibaad ah in la qariyo sirta. Ma sheegi karaan arrimaha qofka bukaanka ah fasax la’aan. Waaxda caafimaadka, xarunta caafimaadka iyo dhammaan qeybaha kale ee adeega caafimaadka waxaad xaq u leedahay inaad si kalsooni leh uga hadasho arrimahaaga. Haddii aad tuhunto in la sheegay arrimahaaga caafimaadka, waxaad xaq u leedahay inaad booliiska u sheegto waxa dhacay.
Shaqaalaha caafimaadka iyo arrimaha bulshadu xaq ayey u leeyihiin in ay sirta bixiyaan haddii qofku ka yar yahay 18 sano ama haddii ay ogaadaan in arrintu lug ku leedahay dambi. Qeybta hore xuquuqdaas waxaa ogolaanaya sharciga bad-baadada caruurta qeybta kalena sharciga dambi baadhista. Sharciga dambe si dhif ah ayuu u khuseyn karaa caafimaadka dhimirka, badanaa ma khuseeyo.
Qofka da’diisu ka yar tahay 18 sano waxaa xuquuqdiisa dhowraya sharciga bad-baadada ilmaha. Sharcigan meelaha qaar wuxuu ka hormarinayaa qarinta sirta arrimaha bad-baadada. Sharcigan qodobkiisa 40§ wuxuu qofka caafimaadka ama arrimaha bulshadda ka shaqeeya farayaa xuquuq ah in ay jabiyaan sharciga haynta sirta, haddii xuquuqda baahida ilmaha ee dayeelku ay khatar galeyso ama haddii qaab dhaqanka ilmuhu ay fasaxayaan in la sugo bad-baadada ilmaha. Shaqaalaha arrimaha bulshadda ama caafimaadka sharciga ayaa la horgeyn karaa waana lagu xukumi karaa, haddii ay ka tagaan sheegida bad-baadada ilmaha.
Haddii qofka ilmaha ama dhalinyarada daryeelaya uu tuhmo in ilmaha tusaale uu guriga kula kulmayo in qoysku dhibaateeyaan ama in la dilo, wuxuu xuquuq u leeyahay in uu arrintaas u sheego shaqaalaha arrimaha bulshada, kuwaas oo arrinta baaraya gurigana tagaya. Guud ahaan sida ay fiicantahay in lagu dhaqmo waa in aan waxba laga qarinin ilmaha ama dhalinyarada. Ilmaha ama dhalinyarada waa lagala hadlaa sida qofka hawsha haya uu u qabanayo waajibadkiisa. Haddii ay jirto xaalad ay tahay in si deg-deg ah wax laga qabto markaas booliiska ayaa lala xiriiri karaa.